Mandalo hanao rakitsary : vahinin’i Wawa any Nosy Be i Luyanna | NewsMada
Mandalo hanao rakitsary : vahinin’i Wawa any Nosy Be i Luyanna
Par Taratra sur 23/02/2016
“Waliwelala”. Ilay hira azo antoka fa maro mahalala, fa mety vitsy kosa no mahafantatra an’i Luyanna. Mpanakanto metisy frantsay sy portiogey izy, izay mandalo eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Ny marina kokoa, vahinin’i Wawa any Nosy Be i Luyanna, ka ao anatin’ny fandraisana an-tsary ilay hira “Elaela”, iarahan’izy ireo manatontosa amin’izao fotoana izao.
Miaraka amin’ny ekipany manontolo i Luyanna amin’izao fandalovany any Nosy Be izao. Teknisianina mpamokatra sy mpanatontosa horonantsary ao amin’ny fahitalavitra M6 ireo. “Fanombohan’ny fifandraisako amin’i Madagasikara izao”, hoy ny nambaran’i Luyanna, vantany vao nigadona teny Ivato omaly maraina, ka nihaonany fotoana fohy tamin’ny mpanao gazety. “Nihaona tany Frantsa izaho sy i Wawa, ka teraka teo ny tetikasa hiara-hihira. Fampifangaroana sy fampiarahana ny kanto malagasy sy portiogey no nataonay. Niainga tamin’ny salegy izahay, avy eo nolaroina gadona hafa”, hoy ny fitantaran’ity mpanakanto ity.
Hatraiza ny fiaraha-miasa? Manam-pinoana be ny hitohizan’ny fiarahana hatramin’izay lavitra indrindra na i Wawa na i Luyanna. Voalohany indrindra ny fandraisana anjaran’ity mpanakanto vahiny ity amin’ny “Festival Sômarôho!” 2016, izay efa fotoana ifanomezana any Nosy Be. Manaraka izany, zava-dehibe ho an’i Nosy Be ny nisafidian’ny mpanakanto iraisam-pirenena hanaovana rakikira any, satria tosika ho an’ny fizahantany koa izany. Tsy rakitsary ihany mantsy, fa hanao fandaharana manokana momba an’i Wawa sy Luyanna ihany koa ny ekipan’ny M6. Ho tosika ho an’i Wawa eo amin’ny fivoahana amin’ny fahitalavitra frantsay izany.
Mpivarotra: Tena mampiakatra ny vidin’entana ny fitaterana 21/01/2022
Faritra arovana: 45 no hisitraka famatsiam-bola avy amin’ny FAPBM 21/01/2022
Faha20 taona nikabariana: efa nanakambana tokantrano 300 mahery i Kalo Miaina 21/01/2022
Satria ratsy fototra…: mifandrebireby amina hevi-bahiny ny fiarahamonina malagasy 21/01/2022
Kitra – Can 2023: hatao anio ny antsapaka ho an’ireo ekipa 12 21/01/2022